MOETHIHAAUNG: MH 370 နှင့် ဆက်စပ်သော နောက်ဆုံးရသတင်းများ စုစည်းချက်
၁. လေယာဉ်ပျောက်ဆုံး မှုကြာမြင့် ချိန်သည် သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲအရ နာရီ (၆၀) ကျော်ကြာမြင့် ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၂. တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် တစ်ခွင် တွင် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။
၃. ထို့အတူ လေယာဉ်သည် နောက်သို့ပြန်လှည့်သွားသည်ဟု သံသယရှိဖွယ်ဖြစ်သောကြောင့် မလက္ကာရေလက်ကြားနေရာအားလည်း ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်သည်။
၄. တိုင်းပြည်နိုင်ငံအသီးသီးမှ ရာနှင့်ချီသော လူများအားလည်း ရှာဖွေရေးအထောက်အကူပြု စက်ပစ္စည်းစုံလင်စွာဖြင့် ဖြန့်ကျက်ကာ ရှာဖွေနိုင်ရန် စေလွှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
၅. နေ့ခင်းအချိန်တွင် လေယာဉ်များ၊ ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ညဘက်အချိန်တွင် သင်္ဘောများဖြင့် ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
၆. ယခုအချိန်အထိ လေယာဉ်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း မရှိသေးပါ။
၇. မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြနေသော လေယာဉ်တံခါးရွက် အပိုင်းအစမှာလည်းMH370၏ အပိုင်းအစမဟုတ်ပါဟု ဗီယက်နမ်လေကြောင်းအရာရှိချုပ်မှ ပြန်လည်ဖြေကြားထားပါသည်။
၈. ယခုအချိန်အထိ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သော အပျက်အစီးအပိုင်းအစများကိုလည်း မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းမှ ၄င်းတို့လေကြောင်းလိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အပိုင်းအစများ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
၉ . မီဒီယာအသီးသီးမှ သီအိုရီများအသုံးပြုလျှက် ခန့်မှန်းတွက်ဆမှုများစွာ ထုတ်ပြန်နေသော်လည်း မိမိ တို့အနေဖြင့် အမှန်တရားမှပေးသော သက်သေများကိုသာ စောင့်ဆိုင်းရဦး မည်ဖြစ်သည်။
၁၀. MAS နှင့် အခြား အေဂျင်စီများ၏ အကူအညီများဖြင့် လေယာဉ်တည်ရှိ ရာနေရာကို သိရှိရရေးအတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
၁၁. ပတ်စ်ပို့အတု ကိုင်ဆောင်သွားသော ခရီးသည် (၂)ဦးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းတို့၏ ဓာတ်ပုံများအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
၁၂. လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲမှုဟု ယူဆရသော်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် စုံစမ်းဆဲသာဖြစ်ပြီး ခိုင်လုံသော သက်သေပြရန်မဖြစ်နိုင်သေးပေ။
၁၃. သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးအားလည်း မိမိတို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ရှည်သည်း ခံစောင့်ဆိုင်းပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
၁၄. ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေရေး သင်္ဘောများအနေဖြင့်လည်း ယခုအချိန်အထိ လေယာဉ်အား ခြေရာခံမိခြင်း မရှိသေးပါ။
၁၅. လေယာဉ်ပေါ်တွင် တင်ဆောင်သွားသော ခရီးဆောင်အိတ်များအားလုံးမှာလည်း သံသယဖြစ်ဖွယ် ပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
၁၆. လေယာဉ်ပေါ်တွင် စီးနင်းသွားသော တရုတ်နိုင်ငံသား များ၏ ကျန်ရှိသော မိသားစုဝင်များအား ယနေ့နှင့် မနက်ဖြန်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် နေထိုင် စောင့်ဆိုင်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၇. ယခုလေယာဉ်အား စုံစမ်းရှာဖွေမှုမှာ လွယ်ကူသော အလုပ်မဟုတ်သလို မျက်မြင်တွေ့ရှိနိုင်မှုများမှာလည်း အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရှိနိုင်ပါမည်။
၁၈. ယခု ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား လေယာဉ်ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် အချိန်အထိ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၉ . လေယာဉ်ပေါ်သို့ စီးနင်းလိုက်ပါသွားသော ခရီးသည်များအား လုံခြုံရေး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုမှာလည်း နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းစံညွှန်းများနှင့်အညီ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
၂၀. ပင်လယ်ရေပြင်တွင် တွေ့ရှိရသော ဆီကွက်ကြီးမှာလည်း MH370 အတွက် အသုံးပြုသော ဆီများမဟုတ်ကြောင်းနှင့် သင်္ဘောမောင်းသော ဆီများဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားရေကြောင်းမှ အတည်ပြုပြောကြားပါသည်။
၂၁. ပတ်စ်ပို့အတု ကိုင်ဆောင်သွားသော ခရီးသည် (၂)ဦးအား လေဆိပ်ရှိ CCTV ကင်မရာများမှတဆင့် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဖော်ထုတ်ချက်များအရ မလေးရှားလူမျိုးများ မဟုတ်ကြောင်း မလေးရဲအရာရှိမှ ပြောကြားပါသည်။
၂၂. ဟောင်ကောင်မှ ပျံသန်းလာသော လေယာဉ်သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကမ်းစပ်မြို့တစ်ခုဖြစ်သော ဗန်တောင်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၆၀ ခန့်တွင် အပျက်အစီးအပိုင်းအစမြောက်များစွာ မြင်တွေ့ရသည်ဟုဆိုထားသောကြောင့် ယခုအခါ ထိုနေရာသို့ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးများ စေလွှတ်ထားပြီဟု ပြောကြားပါသည်။
ကဲ … ဆက်ပြီး ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ကူညီဖေးမကြရအောင်ဗျာ...
တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း ရှာဖွေရေးဧရိယာအား ရေမိုင် (၁၀၀) ပတ်လည် ထပ်မံတိုးချဲ့၊ ရာသီဥတုမှာလည်း လေယာဉ်ပျက်ကျနိုင်သော ရာသီဥတုမဟုတ်၊ ရှာဖွေရေးအတွက်လည်း အဆင်ပြေသော ရာသီဥတုသာဖြစ်၊ မနက်ဖြန်မနက် (၈း၃၀ မြန်မာစံတော်ချိန်)တွင် နောက်တစ်ကြိမ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ထပ်မံပြုလုပ်မည်....
Credit to သတင်းဘုရင်
Posted by Myo Lwin Aung at 9:20 PM